Seychelles Tourism Gurukota rinoongorora zvivakwa zvidiki kuBel Ombre paMahé
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Tourism Gurukota rinoongorora zvivakwa zvidiki kuBel Ombre paMahé
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Seychelles Tourism Minister vanoshanyira muBel Ombre kuMahe.
Vazhinji vashanyi vevashanyi vekugara vari kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, vachinyatso tarisisa uye vachishanda pamatanho mashanu-nyeredzi, Gurukota rezvekunze uye Tourism, VaSylvestre Radegonde, vakadaro neChishanu, Nyamavhuvhu 5, 26, panguva yekushanya madiki madiki kuBel Ombre.
Minister neChishanu vakashanyira zvivakwa zvidiki gumi neshanu, vachiita hurukuro nemuridzi / mamaneja nevashandi vavo.
Akanzwa kwekutanga-ivo matambudziko avanotarisana nawo uye akavayambira pamikana inowanikwa kwavari.
Gurukota Radegonde vakaperekedzwa pakushanya kwavo neMunyori Mukuru wezvekushanya, Sherin Francis.
Kuenderera mberi nechinangwa chake chekunzwisisa zvirinani indasitiri yekushanya nevatambi vayo, gurukota neChishanu vakashanyira zvivakwa zvidiki gumi neshanu, vachiita hurukuro nemuridzi / mamaneja nevashandi vavo uye nekuzvionera vega matambudziko avanotarisana nawo nekuvayambira pamikana inowanikwa kwavari. . Kushanyira zvivakwa zvidiki izvi kwakakosha zvakanyanya sezvo ivo vachida rutsigiro rwakawanda kupfuura zvivakwa zvakakura uye vanotakura runako rwecreole unowanzorasika mumaketani makuru nenzvimbo dzekuzorora, Gurukota Radegonde vakadaro.
Creole kugamuchira vaeni hunhu hunokosheswa uye chiratidzo chevadiki vatambi mukati mekambani yekushanya, akadaro. Anodiwa ne vazhinji vanoshanyira Seychelles, ichi chinhu chinoonekwa nevashanyi ruoko-rwekutanga kuburikidza nevavanogamuchira muzvivakwa zvidiki vanoita zvidhoma zvidiki, kungave kuvakwazisa nezvinwiwa zvemuno kana kuvapa kudya kwakabikwa kumba, uko vazhinji vavo vanozviwana vachidanana na ivo vanowana iwo ekunze evhenekero echikreole chikafu.
Gurukota Radegonde vakaperekedzwa pakushanya kwavo kuLa Maison Hibiscus, iyo Cove Holiday Apartment, Beach Cottages, Beach Cove, Iyo Drake Sea Side Apartment, Surfers Cove, Treasure Cove, Daniella's Bungalow, Casadani, Villa Rousseau, Forest Lodge, Le Chant de Merle , Bamboo River Lodge, The Palm Seychelles naMarie Laure Suites neMunyori Mukuru Wekushanya, Sherin Francis, pamwe nenhengo yakasarudzwa yeNational Assembly yeBel Ombre, Anokudzwa Sandy Arissol.
Nyamavhuvhu yanga iri mwedzi wakabatikana kune mazhinji eiyo zvivako zvakashanyirwa, nevakawanda vachisimbisa kuti kubhuka kuri kuwedzera kubva pachikamu chekupedzisira chekuvhurwa kwenyika munaKurume apfuura.
Vachitaura pamusoro pekuti vakachinjika sei kumamiriro ezvinhu, nekupihwa muswe uyo maindasitiri akapinda mairi, vakasimbisa kuti vakatendeukira kukushanya kwemumba izvo zvave zvichikonzera kuti mikova yavo irambe yakavhurika.
Nekudzimwa kubva kune vashanyi vepasirese kuve kuri kuwanda, varidzi vezvivakwa vanoti vakatora nzira inochinja-chinja iri kuunza mibairo, vamwe vaenzi vachimbomisa kugara kwavo pachinzvimbo chekumisa zvachose.
Nepo mazhinji madiki edzimba dzekushanya ari kugamuchira vaenzi kubva kumisika irikubuda, kune mashoma ayo achiri kutsamira pane echinyakare. Gurukota Radegonde rakavayeuchidza kuti vanofanirwa kupinda mumisika ine mikana, senge Eastern Europe neUAE, uye voongorora nzira dzavo dzekutengesa kuti vararame, izvo zvinogona kuitwa vachitungamirwa neDhipatimendi reKushanya.
Kushaikwa kwevashandi vakavimbika ndeimwe yematambudziko avo, vakadaro, nevazhinji varidzi vezvivakwa vachisimbisa kuti vanoedza nepese pavanogona napo kuchengetedza vashandi vemuSeychellois chete. Kunyangwe vamwe vakabudirira mune izvi, vazhinji vakataura kuti vamwe vevashandi veko havana kuzvipira kuindasitiri uye havadi kuisa nguva inodiwa uye nesimba. VaLoizeau vekuCasadani vakataura kuti vashandi vemuno vanogara vakasarudzika, zvisinei, kana vasiri-vashandi vabviswa muhuwandu hwedu, vana, vakwegura, vasingakwanise kushanda nevaya vanoramba, pane sarudzo shoma yasara uye pane imwe nguva, ivo vanofanirwa kutsvaga basa kubva mhiri kwemakungwa.
Kuita kuti zviwande zviwanikwe zvevashanyi mukati mekuenda kwaive zvakare hurukuro yekukurukura, vazhinji varidzi venzvimbo vachitsvaga vashanyi vavo vachitsvaga zvekuita, nyaya yakapihwa naGurukota Radegonde, vachidzokorora kuti basa riri kuitwa kushandura izvi sezvo zvisiri chete zvinopa vashanyi zvinhu zvekuita asi zvakare zvikonzero zvekugara kwenguva yakareba mukuenda uye kuwedzera mari, kuunza mari munyika.
Zvimwe zvinonetsa zvakurukurwa zvaisanganisira kusagadzikana kweruzha, kusvibiswa, kuraswa nemarara uye kudzikiswa kwekuenda kumahombekombe nekuda kwezvimwe zviitiko.
Kunyangwe paine matambudziko aya, zvivakwa zvaive nemhinduro zhinji dzakanaka, nevazhinji varidzi vemba vachisimbisa kuti nyika yakavhurwa panguva kwayo, ichivapa mukana wekupona. Kwakavhurwa vamwe vazhinji vasati vapa mukana wekukwikwidza, PS Francis akapindura, uye matanho anonzwisisika enyika akaita kuti zvive nyore uye zvinofadza vanhu kuti vafambe sezvo nyika ichigamuchira vashanyi kubva kunyangwe kusvika kuAlaska.
Achitaura nezvekushanya uku, Anoremekedzwa Arissol akataura kuti akavaona vachibereka zvibereko sezvo vaiita kudyidzana nevaridzi vezvivakwa, vachidzidza zvakawanda nezvedambudziko ravo, izvo zvaisanganisira nyaya dzine chekuita neGOP nevashandi vasina kuvimbika. Aive achibvumirana naVaRousseau vekuForest Lodge, avo vakati chirongwa chedzidzo cheSeychelles Tourism Academy chakakosha muindasitiri uye kuti vadzidzi vanofanirwa kunzwisisa kuti kune hupenyu hwakawanda muhotera hunoda uye hunoda kuzvipira pamwe nechido.
Vafadzwa nenzvimbo dzavakashanyira, vese Gurukota Radegonde naPS Francis vakataura nezvenzira dzedzimwe dzenzvimbo diki idzi dziri kuratidza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, vachinyatsoteerera kune ruzivo uye vachishanda pamatanho mashanu-nyeredzi.
Kushanya kwevhiki nevhiki chikamu chekuedza kwaGurukota Radegonde mukusimbisa hukama hwavo nevatambi mukati meindasitiri yekushanya yemuno inozofambisa basa rake mukugadzirisa matambudziko akasangana neindasitiri pasi pehofisi yake.